12 Cashar oo Lagu dabaqay Lahaanshaha Xad dhaafka ah ee Suuqgeynta | Martech Zone
Fulinta istiraatiijiyad suuqgeyn weyn waa isku dheelitirnaanta doorsoomayaal badan. Iyadoo aan lahayn qorshe ku filan iyo istiraatiijiyado muddada-dheer ah, suuq-galka agile dadaalka ayaa marin habaabin kara summad. Laakiin dadaalka suuq-geynta oo gaabis ah oo aad u muhiim ah ayaa caqabad ku noqon kara mid. Meel bartamaha ah waa guul, oo u baahan sii wadida diiradda ujeedooyinka muddada-dheer ee ururka, laakiin lahaanshaha ilo u rogi kara jihada iyo istiraatiijiyadda waqtiga-dhabta ah sida natiijooyinka u qaabeeyaan.
Waxaan dhameeyay aqrinta Lahaansho Xad-dhaaf ah: Sidee Navy SEALs Mareykanku u Hoggaamiyaan una guuleystaan. Waa akhris aad u wanaagsan oo ku saabsan casharradii goobta dagaalka iyo sida loogu dabaqi karo dadaallada ganacsi ee maalin kasta. Halyeey Navy ah, waxaan u maleynayaa inaanan u eexanayn qaddarinta buugga. Laakiin aniga oo ah milkiile meherad leh, kuma heshiin kari waayey wax badan duruusta laga bartay iyo siday u khuseeyaan ganacsigayga.
Ereyada hal bog ayaa ka booday warqadda markii aan akhriyay. Aniga oo ixtiraamaya qorayaasha buugga, waxaan dib u furayaa astaamaha muhiimka ah ee hoggaaminta waxaanan ku dabbaqi doonaa istiraatiijiyadda guud ee urur:
Goolal - falanqee hawlgallada suuqgeynta, fahamka sida ay u saameynayaan shirkaddaada, dadkaaga, iyo dadaalkaaga. Aqoonso oo sheeg hadafkaaga suuq-geynta iyo dhamaadka gobolka olole kasta.
Resources - cadee miisaaniyada, shaqaalaha, hantida, qalabka, la taliyayaasha, iyo waqtiga la heli karo olole kasta.
Qorshaynta - baahinta geeddi-socodka qorshaynta, awood siinta khubarada qaab kasta ama istiraatiijiyad kasta si ay u falanqeeyaan koorsooyinka ficil ee suurtogalka ah.
Xulashada - go'aaminta ololaha ugu fiican, adoo u janjeeraya xulashada ugu fudud ololayaasha iyo xoojinta ilaha halka ay ku yeelan doonaan saameynta ugu badan.
Awood - khubaro suuq geyn ah si ay u horumariyaan qorshaha kanaalka la xushay iyo istiraatiijiyad ay khibrad iyo khibrad u leeyihiin.
Xaaladaha degenaanshaha - Qorsheyso shilalka ay dhici karto in loo maro wajiga kasta ee ololaha. Sidee ayaad u kordhin kartaa natiijooyinka maaddaama ololaha la fulinayo? Waa maxay nidaamka dhacdooyinka ay wax khaldamaan?
Halista - yareynta khataraha la xakamayn karo sida ugu macquulsan. Ma jiraan nidaamyo sharci, tifaftiran, iyo oggolaansho oo lagu dabaqi karo si loo hubiyo u hoggaansamida?
Wakiilo - U oggolow khabiiradaada inay fuliyaan qaybo ka mid ah qorshaha intaad dib u istaagi kartid oo aad hoggaanka ula wareegi kartid geeddi-socodka oo dhan. Waa shaqadaada inaad hubiso in shilalka laga fogaado, iyo in la geeyo ilo si loo hubiyo in lagu guuleysto himilada guud ahaan.
Monitor - si joogto ah u hubi oo su'aalo ka weydiiso qorshaha ka dhanka ah macluumaadka soo ifbaxaya si loo hubiyo inuu sii socdo.
Falanqeynta - Ula socodsiinta qorshaha dhamaan kaqeybgalayaasha iyo taageerida hantida, adoo xoojinaya ujeedada hogaaminta.
Weydii - waydii su'aalo iyo ka qaybgal dood iyo is dhexgal qof walba si loo hubiyo inay fahmayaan dhammaan dhinacyada olole kasta iyo sida ay ula dhaqmaan midba midka kale.
Xilakiii - Falanqee casharrada la bartay laguna hirgeliyo qorsheynta mustaqbalka ka dib ololaha la fuliyo.
Si xiiso leh ayaa ku filan, uma baahnin inaan beddelo ereyo aad u tiro badan si aan ugu dabakho isla casharadii laga bartay goobta dagaalka kuwa ku jira ololaha suuqgeynta. Marxalad kasta oo ka mid ah geeddi-socodkan oo horseed u ah ololaha iyo ka-doodistiisa ka dib, waxaa diiradda la saarayaa ka-faa'iideysiga kheyraadka, si habsami leh loogu hawl-geliyaa, ka dibna dabagal lagu sameeyaa sidii loogu dabbaqi lahaa casharradii laga bartay.
Waxa kale oo jira darajo aan la arki karin oo halkan ah oo aan loo baahnayn in la ogaado. Hadday sidan ahaan lahayd sidaad u maamuli jirtay waaxdaada suuqgeynta iyo miisaaniyadda, olole kasta wuxuu la jaan qaadi lahaa yoolalka ururka. Waxaan la yaabnay intee in le'eg oo shaqada naloo weydiisto macaamiisheenna aan qaban isku toos iyada oo qiimaha dhabta ah ee ururka. Haddii aysan caawineynin qadkaaga - jooji sameynta!
Tags: lahaansho xad dhaaf ahJocko WillinkLeif Babinbuugaagta suuqgeyntashaabadood baddareadingakhriyoshaabadaha